European Stock Msika uye Yakakwira Chibereko Mabhandi e 2019 | Ehupfumi Zvemari
Kuti ugadzire yakachengeteka uye yakaenzana mari yekudyara gore rino razvino, uchafanirwa kuve wakasarudzika kupfuura kusvika zvino. Iwo misika yezvemari iri kuve yakawanda kusagadzikana kupfuura zvaizodikanwa uye nekuda kweichi chikonzero iwe unofanirwa kuve wakangwarira mune zvakapfuura kurovedza muviri. Takatarisana negore umo kusahadzika kunomuka kuti tatarisana nekugadziriswa kana chimwe chinhu chakakura kwazvo mumisika. Kusvika pakufunga nezvekuti mikana yekudyara iripi.
Kune dzimwe nzira dzinoverengeka dzinogona kukudziridza hunhu huri nani mumisika yezvemari uye nekudaro dzinounza kufarira kunokwezva kubva ikozvino. Aya mazano haangouyi chete kubva kumisika yemari, asiwo kubva kune yakamisirwa mari uye kunyangwe kubva kune akasarudzika mamwe mamodheru. Nenharidzano yekupedzisira uye izvo hazvisi zvimwe kunze kweizvozvo kunatsiridza ako ega maakaunzi panopera gore muna Zvita. Kwete pasina akawanda matambudziko anomuka munzira.
Kune rimwe divi, kwave nekugadziriswa kwakawanda mukuyera, mushure memhedzisiro yehondo yekutengeserana iri pakati United States neChina, uye chinhu ichi chinogona kuve chaicho mukana webhizinesi. Kunyanya, yekupa yakanyanya kukwikwidza mitengo kupfuura kusvika mwedzi mishoma yapfuura. Mamiriro ezvinhu aunogona kutora mukana kubva ikozvino zvichienda mberi, kunyangwe hazvo chisingazoregererwe kubva pakuedza kuzadzisa zvinangwa zvaunoda muhurongwa hwako hwekudyara. Beyond yakateedzana yehunyanzvi hwekufunga mune zvemari zvinhu.
1 Zvakanakisa Zvibereko zvepamusoro Zvakawanda
2 European stock exchange ndiyo yakanakisa sarudzo
3 Mukati memusika wekutengesa, chikamu chebhangi
4 Makambani ane hutano hwakaringana mapepa
5 Kusiyanisa zvinhu zvemari
6 Anti cyclical tsika
Zvakanakisa Zvibereko zvepamusoro Zvakawanda
Ichi chigadzirwa chemari chinodikanwa che kutarisana negore rino rakaoma uye kuti iwe uve netarisiro yakanaka kwazvo pachiitwa ichi chiri kuenderera. Nekuti inopa mikana yakanaka kwazvo muchikamu chinokura pamitengo yakanaka uye panotadza mitengo iri pasi. Pamusoro pezvimwe zvikamu zvemari yakatarwa inoparara yakamira mukukwanisa kwavo kugadzira kudzoka kusevha isingagutsi zvakanyanya kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati.
Chimwe chezvikonzero zvekusarudza iyi sarudzo mune yekudyara inoenderana nechinhu chakakosha sekusawirirana kwayo pamwe nekukwira kwemitengo. Takatarisana nemamiriro ari kuuya ekuwedzera munzvimbo ye euro, sezvakaratidzwa nezvakafanotaurwa ne European Central Bank (ECB). Mupfungwa iyi, zvinodikanwa kuti tiongorore zvakanaka kuti ndiani mupi wechigadzirwa chemari ichi kuti apinde munzvimbo dzakanakisa mumabond. Nekuti pane zvakawanda zvingasarudzwa zvatinofanirwa kuita kuti capital ibatsire kubva ikozvino.
European stock exchange ndiyo yakanakisa sarudzo
Mukati memakambani, mhinduro yakanakisa inoenderana nekutora zvinzvimbo muquity kubva kukare kondinendi Nechikonzero chiri nyore kwazvo kutsanangura uye kuti chikamu chakanaka chevashambadziri vadiki nepakati vanonzwisisa uye icho chinopfupikiswa pakuti iwo musika wezvemari ndiwo une kukoshesa kwakanyanya panguva ino. Kune rimwe divi, anga asina a nzombe rally zvakanyanya seyakagadzirwa mumusika wekutengesa weUnited States. Asi zvinopesana, yakaratidza kushanduka kukuru mukati memakore maviri apfuura. Kusvika padanho rekuvhara 2018 mune zvisina kunaka, nekudzikira padyo ne10%.
Kune rimwe divi, chimwe chikonzero chekunanga kumusika wakakosha wezvemari iri muchakuti ichine nzvimbo yakawanda yekuvhara uye nekuti haigone kukanganwika kuti ndiwo musika unogona kuwana mikana iri nani panguva ino. Nemitengo ine mitengo yakachinjika uye izvo zvinoita kuti zvive zvinokwezva kugadzirisa kusarudza kutenga, kunyanya yakanangana nepakati nepakati. Hazvishamisi kuti ivo vane yakanyanya kukwirira yekuongorora mikana, iine mikana chaiyo yebhizinesi.
Mukati memusika wekutengesa, chikamu chebhangi
Mukati meEuropean equities, imwe yemasangano anokwezva hapana mubvunzo chikamu chebhengi. Kunyanya nekuti yakadzikira zvakanyanya musimba mugore rapfuura. Hazvigone kukanganwika kuti chikamu chemusika wemasheya ichi chinobva kune imwe yemamiriro ezvinhu akaipisisa uye nepfungwa iyi zvakanyanyooma kuti itowedzera muna 2019. Kune rimwe divi, zvakafanira zvakare kuongorora musarudzo iyi kuti emabhangi zvinhu zvakabatanidzwa nechikwereti chikwereti nemari yemubhadharo inoshanduka vanozove vamwe vevanonyanya kubatsirwa mukuumbwa kwemitengo yavo. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Kune rimwe divi, uye sekureva kwevaongorori vezvemari, iri chikamu chakakosha chiri mubatanidzwa, zvese maererano nemasangano emunyika uye mukati meEuropean nharaunda. Kusvika padanho ravanoratidza ratidziro dzakanyanya ratings, zvakanyanya kuti ugamuchire kugadzira zvigadzirwa mumwedzi inotevera. Mune zvimwe zviitiko, pamwe nemutengo uri pasi pemitengo yavo chaiyo. Uine iyo yakakosha bhenefiti inogona kuwanikwa mumabasa akaitwa kubva zvino zvichienda mberi.
Makambani ane hutano hwakaringana mapepa
Imwe yemaitiro anogona kutorwa mune ino nyowani yemusika wemusika kosi ndeyekuenda kune iwo masheya kukosha ayo anopa hutano hwakanaka mabheji. Kwete pasina, ivo vachave ivo yakamisikidzwa zvakanaka ndezve kukudziridza yakasimba uptrend. Kana zvirinani senge yekutanga sisitimu yekudzivirira mari yedu yakaiswa mumisika yemari. Iyi ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzaungave nadzo gore rino, uye kwazvinowedzerwa kuti vanopa mitengo yakachinjika. Nezvavanogona kuve neshanduko inonzwisisika mumusika wemasheya uye mune chero mamiriro ezvinhu zvirinani pane zvavakagadzira mugore rapfuura.
Iri kirasi rekuchengetedzeka, kune rumwe rutivi, richava chinhu chechido chechikamu chakanaka chemari yekudyara kuti vagadzire mapotifoti avo ekudyara. Uye ichi chokwadi chezvemakambani chinotamba chichitsigira zvido zvevashambadzi vadiki nepakati avo vakatomira mune izvi zvemari midziyo. Ne mukana wekuti ivo vanogona kuwana iyo purofiti yegore rose yakatenderedza zvakapetwa kaviri. Zvinogona kuva chimwe chezvishamiso zvikuru kuti gore rino richangobuda. Chero zvazvingaitika, iri imwe nzira isingafanire kushayikwa mukugadzirira kwako kunotevera kwekudyara portfolio.
Kusiyanisa zvinhu zvemari
Imwe kiyi yekutarisana neiyi nyowani yemusika wemusika chiitwa nekubudirira kunozivikanwa kunoenderana nekusiyanisa mari. Ndokunge, sanganisa mari yakatarwa nemari inoshanduka-shanduka sefomula chengetedza mari yako mukutarisana nechero chiitiko chekusagadzikana mumisika yemari. Chero zvazviri, iri zano rinotarisirwa kune vanoita mari nechengetedzo kana dziviriro vanoisa kuchengetedzeka kwekuchengetedza kwavo pamusoro pemamwe maonero emusika. Uye zvakare, iri zano riri nyore kwazvo kuita kubva zvino zvichienda mberi.
Iyo inoverengerwa pamusoro pezvose kuburikidza nemari yekudyara inozivikanwa seyakavhenganiswa kana yepakati. Iko kwakasiyana mari yemari inosanganiswa kuwana mukana wakakwana wekuchengetedza, kunyange zvakadaro pasina kudzoka kwakanyanya. Kune rimwe divi, ichi chigadzirwa chekudyara chinogadzirwa munzvimbo zhinji dzenharaunda, pasina zviyero zvine chekuita nemari yemari iyo ichavhura nzvimbo. Nenzira iyi, iyo investa yakanyanya kuwanda uye nekudaro inogona kuchinjika kune ese zviitiko zvinomuka kubva kumisika yemari, zvese zvemari yakatarwa uye inoshanduka. Pasina kana chero kusarudzika kwemhando ipi neipi.
Anti cyclical tsika
Iyo ndeimwe yenzira dzakachengeteka uye dzinoshanda kwazvo kana misika yemakero isina kuzvibata zvakanaka gore rino. Nekuti zvirokwazvo, hazvitsamiri pamatanho ehupfumi uye vanowanzoita zvirinani kana mamiriro emusika wezvemari akanyanya kushata. Naizvozvo, ivo havateveri iyo yakatsanangurwa maitiro, asi panzvimbo pezvo vanotungamirwa neye yavo bhizinesi mhedzisiro. Ivo vanomiririra akakodzera masheya emusika zvikamu senge chikafu, makambani emagetsi kana migwagwa mikuru, pakati pevamwe vacho.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mhando dzetsika idzi dzinogona kuita mushe gore rino, kunyangwe pasina kutarisira kufamba kune chisimba mune imwe nzira kana imwe. Nekuti iyo volatility haina kunyatsoita seayo mamwe madhinominesheni ayo akakodzera. Kunze kwezvimwe zvakateedzana zvekufunga kwehunyanzvi uye zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Chero zvazvingaitika, iwo hunhu huchafanirwa kuchengetwa hwakangwarira paRadar kutora zvigaro pane imwe nhambo mugore idzva rekutengesa. Kunyanya, izvo zviri kusarudzika mukuchinja kwemitengo yavo.
Iri izano rinofanirwa kuve chikamu cheinotevera ongororo yaunoita yako portfolio yekudyara kuitira kuchengetedza nzvimbo dzako mumisika yemari. Kunyangwe ivo vari mukwikwidzi kuti vawane kudzoka kunogona kuve kunonakidza kudzivirira zvido zvako kubva pano kusvika pakupera kwegore. Uye zvakare, mazhinji eaya mazano anogovera zvikamu pakati pevachagovana navo, nechido chakatarwa uye chakavimbiswa chinosvika 6%.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » European Stock Market uye Yakakwira Chibereko Mabhandi e2019